Ngano dzerudo rwerudo | Bezzia
Maria Jose Roldan | 20/06/2022 22:44 | Hukama
Rudo rwerudo nderimwe remanyepo makuru anongoitika munyika isiri yechokwadi kana yekunyepedzera yemabhaisikopo kana mabhuku. Rudzi urwu rwerudo runokonzeresa fungidziro huru pakati penhengo dzevaviri uye kuwedzeredza kwayo iyo isina kufanana nezvinoitika munyika chaiyo. Zvakakosha kutiza kubva kungano idzi uye kurarama rudo rwechokwadi nemudiwa.
Munyaya inotevera Tiri kutaura nezve nhevedzano yengano dzerudo rwerudo uye kuti ngano idzi dzinogona sei kukonzera kukanganisa kukuru kune vaviri.
1 Kutsvaga kwehafu iri nani
2 rudo runogona nezvose
3 Vanhu vanopikisa vanoda uye vanokwezva mumwe nemumwe
Kutsvaga kwehafu iri nani
Pfungwa yehafu iri nani ndeimwe yengano idzo dzine hukama nerudo rwerudo. Zvinofungidzirwa kuti rudo ndirwo rwoga uye kuti kune mumwe munhu munyika achaita kuti tifare muupenyu. Vanhu vazhinji vanoita chikanganiso chikuru chekumirira hupenyu hwavo hwese kune iyo hafu iri nani isingazombouya. Zvose izvi chimwe chinhu chenhema chiri chechinhu chisiri chechokwadi umo rudo rworudo runofamba. Chinodiwa ndechekurarama hukama hwakasiyana hunobatsira munhu kuti ajekerwe nezvaanoda panhau yerudo.
rudo runogona nezvose
Rudo rwunooneka mungano runoshamisa uye runogona kukunda chipingamupinyi chipi nechipi chinoiswa pamberi parwo. Muhupenyu chaihwo, zvakasiyana zvinoitika uye kuti rudo harugoni kuita zvose. Rudo umo hunhu hwakasiyana husingaremekedzwe haugone kubvumidzwa. Hapana chinoitika kana iwe ukati kwete rudo uye hukama. Chinhu chinonyanya kukosha mufaro wako pachako, zvisinei nekuti munhu anogara ega here kana nemumwe munhu.
Vanhu vanopikisa vanoda uye vanokwezva mumwe nemumwe
Chinhu chakajairika ndechekuti vanhu vaviri vane mifungo nemaonero akasiyana vanochengeta hukama, vanopedzisira vatarisana nguva nenguva. Kukakavadzana kunopfuurira uye kukakavara kazhinji kunokanganisa zvakanyanya chero rudzi rwehukama.. Muzvizhinjisa zvezvinoitika, misiyano yakadaro pamusoro pemifungo inowanzopa chinetso chakakomba pakunouya kukuchengeta ukama hunorangarirwa kuva hwakanaka. Muzviitiko zvakawanda zvakaoma chaizvo kuchengetedza hukama nemumwe munhu akasiyana zvachose uye akasiyana.
Muchidimbu, rudo rwerudo sezvatinonzwisisa rwunongoitika mungano. Zviri pachena kuti muhupenyu, rudo rwakanyanya kuoma uye rwakaoma. Chinokosha kunakidzwa norudo rune utano uye rwakasimba uye runogara. Kune akatevedzana maitiro anofanirwa kunge aripo nguva dzese muhukama, kungave kuvimba, ruremekedzo kana kushivirira. Kusanganiswa kwezvose izvi kunopa rudo rune hutano uye humwe hutano mukati mehukama. Rangarira kutiza zvakanyanya sezvinobvira kubva murudo rwunoitika mungano uye unakirwe nerudo chairwo, rwakakura uye rune hutano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » Ngano dzerudo rwerudo
Zucchini uye mozzarella gratin